Akakurumbira mamuseum eSpanish pa Instagram - A anofanira-ona | Kufamba Nhau
Iwo anonyanya kuzivikanwa mamuseum mu Instagram
Susana godoy | | Kufarira
Parwendo rwese rwatinoita, imwe yeanofanirwa-kuona ndiyo iyo inoita kuti tifarire hunyanzvi. Dzimwe nguva isu hatizvione uye chokwadi ndechekuti isu tiri kushaya mashoma mashoma easingaverengeke kukosha kwehupenyu hwedu. Naizvozvo, zvakakodzera kuziva imwe neimwe yeiyo mizinda mizhinji yekuSpain inozivikanwa, uye kuti isu tinofanirwa kufunga nezvayo mune ramangwana kupukunyuka.
Pane imwe nguva mavari, tinogona kutora mufananidzo wekuomarara uye nekugovana nawo nevateveri vedu vese kuburikidza ne Instagram. Chinhu chave chijairira chikuru! Kunyanya kana uyu mufananidzo uchiteverwa neusingaperi 'ma hashtag', kuitira kuti nenzira iyi mukurumbira wawo usvike kune vanhu vazhinji. Nezvo uye nekutenda kune yakasarudzika portal Holidu, zvave zvichikwanisika kuti uone kuti ndeapi anozivikanwa mamuseum muSpanish. Une chero wakasara usina kushanya here?
1 Akakurumbira mamuseum eSpanish pa Instagram: Museum yeContemporary Art yeBarcelona
2 Prado Museum muMadrid
3 Guggenheim Museum muBilbao
4 Reina Sofía Museum yeMadrid
6 Dalí Museum muGirona
7 Andalusian Center yeContemporary Art
8 Institut Valencià d´Art Yemazuva Ano
9 'Artium', Basque Center-Museum yeCompemporary Art
10 Picasso Museum muBarcelona
Akakurumbira mamuseum eSpanish pa Instagram: Museum yeContemporary Art yeBarcelona
Inoita seyakakurumbira kupfuura mamuseum mu Instagram. Izvi zvinodaro nekuti ndeimwe yenzvimbo dzinonyanya kutaurwa, iine huwandu mazana zana nemakumi mana nemakumi manomwe nenomwe ezvinotaurwa Mari yakakwira yenzvimbo yakakosha munyika medu. Mariri, tichawana mabasa ehunyanzvi ari ehafu yechipiri yezana ramakore rechi147. Vari mabasa anodarika zviuru zvishanu kubva kuma5s kusvika nhasi, uko mutoo weEuropean pop unosanganisirwa neye avant-gardes iyo yakakunda mukati memakumi matanhatu pamwe nema 60s. Kana iwe uchida kushanyira iyo, unogona kuzviita munharaunda ye'El Raval '. Iyo inozivikanwa zvakare se 'MACBA', yakaziviswa mamuseum einofarira nyika. Zvinoenderana neiyo portal Holidu, iyo yakajairika mifananidzo pa Instagram haichatorerwa mukati memuseum ino, asi munzvimbo yayo yekunze. Nzvimbo yakakwana kune vese vanoda 'skate'.
Prado Museum muMadrid
Isu tinoziva kuti kana tikataura pamusoro peanonyanya kuzivikanwa mamuseum muSpanish, iyo Prado Museum yaifanirwa kunge iri pane urwu runyorwa. Iyo ndeimwe yeakakurumbira, kwete kuSpain chete, asi pasirese. Zvakare kutaura, zvinogona kunzi zvine mabasa kubva muzana ramakore rechiXNUMX nerechiXNUMX. Pano isu tichafadzwa ne inoshanda naGoya pamwe naVelázquez kana El Greco, pasina kukanganwa Bosco, ane muunganidzwa ndeimwe yeakakwana kwazvo. Kana kukosha kwemuseum ino kwaifanirwa kupfupikiswa mumutsara mumwe, zvingave kuti inogara yakakoshesa tsika yedu. Asi kudzokera ku Instagram, kune 116, ne 'Las Meninas' riri iro basa rinozivikanwa kwazvo pasocial network. Unogona kuishanyira, nenzira yakadzikama mukati mevhiki uye mumaawa emangwanani.
Guggenheim Museum muBilbao
Kana yatove yakakosha pachayo, pa Instagram inosimuka ine zvinopfuura zviuru zana zvekutaura. Iyo Guggenheim Museum ndeyeyezvino mamuseum. Yakavhurwa muna100 uye yakaratidza pfungwa yekuvandudza chivakwa chakasiyana zvachose nezvatakange tajaira. Uye zvakare, ine inoshanda kubva kuNew York pamwe nezvimwe zvidimbu izvo zvinokweretwa kubva kune mamwe mamuseum. Vanopfuura mamirioni vagari pagore, vanogona kuonekwa panguva ino uye kune vazhinji, iyo chidhori chidhori kubva kunze kwenyika ndeimwe yeanonyanya kutaurwa. Kunyangwe Muvhuro wakavharwa, mamwe mazuva emangwanani pane vanhu vashoma, zvinozotibvumidza kutora mifananidzo iri nani.
Reina Sofía Museum yeMadrid
Maive muna 1990 pakavhurwa Reina Sofía Museum. Mariri tichawana zana ramakumi maviri uye hunyanzvi hwazvino. Iri munzvimbo yeAtocha uye basa rayo rakakurumbira ndeye 'Guernica' naPicasso. Asi pamusoro pezvo, kune mamwewo mabasa makuru aJoan Miró kana Salvador Dalí, pasina kukanganwa iyo surrealist art yeMagritte kana Óscar Domínguez. Kune zvese izvo isu zvatinogona kuwana mairi, chazove chimwe cheanonyanya kushanyirwa mamuseum. Pasina kuenda kumberi, mu2016 yakatyora nhoroondo yayo nevanopfuura mamirioni matatu nehafu kushanya.
Ino miziyamu yaive nemazita evatambi vaisavapo kune imwe nzvimbo. Asi kwete izvo chete, asi iwe unogona zvakare kuona akasiyana kuratidzira pamwe nezviitiko. Iko kuunganidzwa kwakachengetwa pano kwakasiyana kwazvo, kubva kuItaly Renaissance, kuburikidza naRubens kana Caravaggio, kuenda kuRembrandt's Dutch Baroque. Ose maratidziro eRococo uye chokwadi chaManet nekufungidzira zvinouya pamwechete mune ino inofanirwa-kuona Museum. Kunyangwe kune vakawanda, rimwe remabasa makuru ndere 'Mukadzi muimba yekugezera' naRoy Lichtenstein.
Dalí Museum muGirona
Yakawanda yacho yakatsaurirwa kumabasa emupendi Salvador Dalí. Uchaiwana muchivara Gala Salvador Dalí, muFiriueras. Iyo data inoratidza kuti mu2017, yaive yechitatu yakashanyirwa zvakanyanya muSpanish museum. Kunyangwe chiri chokwadi kuti mabasa ese ane protagonism huru, kune vakawanda netizens, imwe yemifananidzo inoratidzwa ndiyo yavo facade. Iyo shongwe yakashongedzwa nemazai mahombe, inokwezva yakawanda yekutarisisa uye zvayakataura zvinosvika kupfuura gumi nemashanu.
Andalusian Center yeContemporary Art
Seizvo zita rayo rinoratidzira, hunyanzvi hwazvino uno huchave hunonyanya protagonist wenzvimbo ino. Yakave iripo, kubvira 1997, muMonastery yeSanta María de las Cuevas. Mariri iwe unonakidzwa neanopfuura zviuru zvitatu zvemabasa ounyanzvi, kunyangwe kune vakawanda, chete chivakwa kana Cartuja Monastery, zvese hunyanzvi. Nechikonzero ichi, mifananidzo yakajairika ichave ichibva muchikamu chekunze ichi, asi kana iwe uchitova mukati mayo, usarasikirwa nechomukati nekuti chinogara chiri chinokosheswa uye chine zvakare dzinosvika zviuru gumi nezvishanu.
Institut Valencià d´Art Yemazuva Ano
Muna 2013 yaive yechina yemasimamende ekuSpain akanyanya kushanyirwa. Yakagadzirwa muna 1986 kuitira kuti hunyanzvi hwamazuva ano kuve nemhosva yekuwedzera yekugumisira. Anopfuura zviuru gumi zvemabasa akavakirwa pane izvi Art century yezana. Panguva ino iwe unogona zvakare kuwana ese ari maviri makosi, mashopu uye makonati kana misangano. Zvichida chimwe chezviratidzwa zvinonyanya kutaurwa ndezvaAnette Messager.
'Artium', Basque Center-Museum yeCompemporary Art
Mu Álava, Nyika yeBasque, tinowana imwe yemamiziyamu akakurumbira eSpain. Mukati, inogara ese maBasque neSpanish anoshanda kubva muzana ramakumi maviri nemakumi maviri nemasere. Iyo zvakare ine zvimwe zvenguva pfupi kuratidzira uye inogara ichibatanidzwa kune chaiwo chaiwo matimu. Yakavhurwa muna 2002 uye pakati pemabasa ake ese, iyo zvivezwa naMiquel Navarro. Iye anozivikanwawo pa Instagram nekuda kwekutaura kwake kudarika zviuru gumi.
Picasso Museum muBarcelona
Kune mabasa anopfuura mazana mana nemazana maviri nehunyanzvi Picasso mukuru watinogona kuwana munzvimbo ino. Kwete chete mukupenda, asiwo mukuveza, kudhirowa kana kunyora. Zvinogona kutaurwa kuti ndechimwe chezvikamu zvakakwana kwazvo zviripo. Yakavhurwa kune veruzhinji muna 4 uye pamwe inonyanya kuzivikanwa pamanethiwo ari 'Mifananidzo yaPicasso' rakanyorwa naDouglas Duncan. Kana iwe uchinetseka nezve zvataurwa pamusoro payo pa Instagram, zvinofanirwa kutaurwa kuti zviri 9 660. Wakatovashanyira vese here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Kufarira » Iwo anonyanya kuzivikanwa mamuseum mu Instagram
Iwo emashiripiti mawere eMoher
Saona Island, isingazivikanwe yeDominican Republic